Makambani mazhinji parizvino ari kugadzirisa ramangwana reiyo wiricheya uye maitiro ayo anogona kupa mushandisi. Pamwe rimwe zuva tichaona wiricheya ichibhururuka asi parizvino, tinofanira kunamira pamavhiri pasi. Muchinyorwa chino, tichaenda kukambani iri kunanga munzira kwayo mukugadzira inotevera futuristic wiricheya.Kambani iyi inonzi Whill. Isu tichanyurawo mune kuti sei kambani yakatanga uye kuti yakatanga sei. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo rwakadzama pane yavo webhusaiti pano. Iyo kambani yakabatawo kutariswa kweInc uye kana iwe uchida kuverenga kwavo kutora kukambani uye zvairi kuita iwe unogona kubaya pano.
Sezvo makambani anochengeta kusundira mberi kuenderera mberi iyo wiricheya indasitiri zvinonakidza kuona zvese zvichiitika. Patinoona wiricheya yakakosha kufambira mberi mu magadzirirwo ewiricheya uye mushandisi zvinhu. Iwe hausi kuona nhau dzewiricheya yakarova nhau huru kunze kwekunge zvichisanganisira mumwe munhu atove mune epamusoro nhau. Semuenzaniso, pakaitika chiitiko nemukurumbira rapper Kanye West, iyo indasitiri yewiricheya yaive neimwe nzira yekupenya nekuti yaisanganisira wiricheya.
Whill yakawanikwa muToyko mugore ra2012.Vatangi veWill vaive neshamwari yaive wiricheya mushandisi uye ivo vaimuziva kwemakore mazhinji. Kana mumwe munhu ari mu wiricheya vanhu vanowanzoona munhu iyeye achirwara kana kunyangwe munhu asina kusimba dzimwe nguva nekuti havagone kushandisa makumbo avo. Izvi zvakaitika kune zvakaitika kune shamwari yemuvambi. Sahwira wemuvambi akararama zvakajairika upenyu uko kwavakati aive munharaunda, akazvimiririra, uye anofarira kuda. Vakacherechedza akatanga kuchinja maitiro sekusaenda kumagirosa uko kukona nekuda kwematauriro akashata aaizotambira. Mukupindura kuona shamwari yavo ichishushikana, vakagadzirira kumubatsira nekugadzira kufamba mudziyo unomubatsira kuti awedzere kuvimba naye uye amupe simba. Ichi chishandiso chaive akaita saizvozvo anogona kunzwa kuzvivimba zvakare obuda pachena pachena nechido. Zvakare, nemaonero aiona veruzhinji kubva zvino zvichienda mberi. Kambani yega yega ine chikonzero chavo chekuti sei kambani yakatangwa. Zve whill zvese zvakatanga nekuda kwekuda kwekubatsira shamwari yepedyo.
Iyo kambani Whill yakanga yavaka prototype yeTokyo mota show uye zvakavapa kurudziro uye zvakamutsa chimwe chinhu mukati mavo nekuti mushure meizvozvo vaive vafunga kuvaka mushure meiyo pfungwa. Chiitiko cheTokyo motorsport chakakura saka chinofanirwa kunge chakabatsira kambani mukuvafumura kune vangangove vatengi kana pamwe vanoisa mari. Mushure mekuva nechitarisiko pachiitiko ichi vakatanga kuenda kumakwikwi ekutanga eTechCrunch Toyko. Mucherechedzo wavakashandisa kupinda mumakwikwi ndiwo waiva wekutanga wavakagadzira. Mubairo wavakawana waive miriyoni yeyen iyo padhora inobuda kuita zviuru gumi nezviviri nemazana mashanu emadhora. Muna 12,500, vakatamira kuSan Francisco kwavakajoinha chirongwa che tech accelerator chinozivikanwa se2013 startups. Kubva pavakabatana kuti vakakwanisa kuunganidza mari inosvika mamiriyoni gumi nematatu emadhora kubva kune vakasiyana siyana. Network Corporation yeJapan uye Sun Microsystems co-muvambi Scott McNealy akaisawo mari mukambani.
3. Ikozvino Kuda
Will atengesa mazana mashanu e futuristic wiricheya iyo yavanoti mudziyo wekufamba. Iwo macheya akatenderwa neFDA muna Kukadzi nemadhora gumi nemana. Kiyi huru maficha anosanganisira, 5.5 mamaira ari pamusoro kumhanya, bhatiri rinotora maawa masere, rinogona kutyaira pane dzakawanda terrains, uye rinogona kudzorwa ne joystick kana chishandiso chaunotora pane yako smartphone. Munguva pfupi yapfuura, kambani iyi yaive kumusangano we robhoti unozivikanwa seRoboUniverse. Pamusangano, Whil airatidza itsva zvisikwa zvine iyo kugona kuchovha nzira yakatemerwa uye zvakare kutevera kumashure kwemunhu otomatiki. Aya maficha zvichabatsira kusimudzira indasitiri yemawiricheya maererano neruzivo rwemichina.
Kambani yakaita saWill yakapinda muindasitiri kuti ikurumidze iyo tekinoroji yeiyo wiricheya. Kune mamwe makambani akaita zvigadzirwa zvakafanana asi izvozvi, zvichiri kubata munhu wese neyakajeka asi inoshanda dhizaini. Iyo mitengo avhareji kutenderedza $ 7,999 inova mutengo wakanaka nokuti wiricheya asi ndizvo izvo iwe zvaunobhadhara inovation uye inotonhorera kutarisa wiricheya. Saka, enda uvatarise pamwe tarisa akati wandei mavhidhiyo uye uone zvaari nezve uye magadzirirwo avakaita dhizaini yewiricheya yavainayo izvozvi uye utisiye chirevo maererano nemanzwiro aunoita nezve mirayiridzo mawiricheya vari kutora.
Kuzivikanwa pakati pevakaremara vanoshanda nesimba